(L) မခန့်မှန်းရသေးသောနှလုံးသား (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်ခြင်း
(L) ကိုငါနှလုံးသားခန့်မှန်းရခက်မတ်ေတာသညျ (2012)
comments: အပိုဒ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဆုလာဘ်ထက် dopamine တစ်ပိုကြီး jolt ပေးခြင်း unpredicatbility ofrewards (ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) အကြောင်းပါ။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြောင့်ရနိုင်အဖြစ်အကြောင်းကိုအဖြစ်ခန့်မှန်းရခက်သည်။
By Richard အေ Friedman
ကိုချစ်ဖို့ခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်; ပျော်ရွှင်ဖြစ်ကိုချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းပျော်ရွှင်ဖြစ်ခံရရမလဲ ဤသည် syllogism ယုတ္တိဗေဒအတွက်မဆိုဆုအနိုင်ရမည်မဟုတ်ပေမယ့်တိတိကျကျလူ့အပြုအမူတစ်ခုစပ်စုဝိရောဓိဖော်ပြထားတယ်: ခန့်မှန်းရခက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏သှေးဆောငျ။
ငါတို့ရှိသမျှသည်သစ္စာတော်နှင့်အမွဲနှစ်လိုဖွယ်ပင်သီလဖြစ်ကြောင်းပြောသည်ပါတယ်, သေးကျနော်တို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့အပွောငျးအလဲဆန့်ကျင်ကာကုန်းတက်စစ်တိုက်မယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဗျာဆရာတွေနှင့်ဒဿနပညာရှင်များကသတိပေးခဲ့သည်ပါပြီ။ ဒါဟာရှိတ်စပီးယားယောက်ျားအစဉ်အဆက်လှည့်စားခဲ့ကြ "အဲဒီအမျိုးသမီးတွေသတိပေးခဲ့သည်ကတည်းက 400 နှစ်ပေါင်းခဲ့ရဲ့; တဦးတည်းအရာအဆက်မပြတ်မှတဦးတည်းပင်လယ်၌ခြေလျင်နှင့်ကမ်းပေါ်တဦးတည်း, ဘယ်တော့မှမ။ "
psychoanalysts များအတွက်ရှိမရှိဆက်ဆံရေးတွင်သို့မဟုတ်ဘဝကိုတခြားဒေသများရှိ, ဒုက္ခမှရေးဆွဲပုံပေါ်သောလူ, သူတို့ကဆငျးရဲဒုက်ခအဘို့အကာသတိလစ်ရည်ရွယ်ချက်ကအထဲ၌တည်ရှိမရှိ၏တရားဝင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမြှင့်။
သို့သော်လည်းငါသည်အခြားခန့်မှန်းရခက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များ၏ဆွဲဆောင်မှုကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လမ်း, ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်တစ်ခု quirk ပါဝငျကွောငျးတစျခု, လိင်ကဲ့သို့အထူးထူးအပြားပြားဆုလာဘ်မှအကောငျးဆုံးအထိခိုက်မခံကြောင်းနက်ရှိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံတစ်ဦးစရိုက်အာရုံကြောကွန်ယက်ငွေကြေးနှင့်ရှိစေခြင်းငှါ, ထင် အစားအစာ။
Amore ပူးတွဲမှု၏ဤကြင်နာလောင်းကစားဝိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၏ - ငွေကြေးချစ်ခင်ခြင်းနှင့်လိင်ကြောင်း မှလွဲ. ။ သော့ချက်ကအထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးနှောက်မှသှေးဆောငျစေသည်သောအကျိုးကိုမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်: ဘာကြောင့်နားလည်ရန်, လူတွေနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအောက်တွင်ဆုလာဘ်ပေးသောအခါဦးနှောက်အတွက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါစိတ်ရောဂါဂရက်ဂိုရီ Bern ထားတဲ့အတွက်လေ့လာမှုမှာဖွင့်သောအမှုကိုပြု ဘာသာရပ်များသစ်သီးဖျော်ရည်နှင့်ရေပေးခဲ့တစ်ဦးချင်းစီ session တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းစဉ်အတွင်းတစ် MRI နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဦးနှောက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးစဉ်နှစ်ဦးစလုံးသည်သဘာဝပျြောမှေ့စဆုလာဘ်, ဘာသာရပ်များကျပန်းကြားကာလမှာရေနှင့်သစ်သီးဖျော်ရည်ကိုလက်ခံရရှိ; အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်စဉ်အတွင်း, ရေနှင့်ဖျော်ရည်တိုင်း 10 စက္ကန့်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။
ပါမောက္ခ Bern အကျိုးကိုတစ်ဦးကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖက်ရှင်အတွက်ကိုအပ်သောအခါထက်မျှော်လင့်ခဲ့သည့်အခါရေနှင့်ဖျော်ရည်ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုပိုမို activation ရူးနှမ်းကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အများဆုံးဘာသာရပ်များရှင်းရှင်းလင်းလင်း preference ကိုအခိုင်အမာသော်လည်း - ထိုပုံစံအကျိုးကိုရေသို့မဟုတ်သစ်သီးဖျော်ရည်ခဲ့ရှိမရှိစစ်မှန်တဲ့ကျင်းပခဲ့တယ်။
ကအရေးပါအဆင့်ကိုရောက်ရှိပါလျှင်အခါဆုလာဘ် circuit ကိုမီးလောင်မှု, နှိုးဆွပေးသည့်အခါသူကလည်းအရာ, ဦးနှောက်အရာတစ်ခုခုနဲ့တူ, "ကအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂရုပြုနှင့်ဤအတွေ့အကြုံကိုသတိရပါ။ " ဒီ circuit ကိုလွှတ်ပေး dopamine ကိုပြောတယ်, အပျြောအပါးတစ်သဘော။
ဒီဖြစ်ပျက်အကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဦးနှောက်ရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုအစားအစာနှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်ထောင်ဖက်နဲ့တူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှုဖို့အရေးပါဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေအမျိုးမျိုးသောဆုလာဘ်, အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် extract ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable လုပ်ဖို့နှစ်ပေါင်းသန်းပေါင်းများစွာကျော်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းလှုံ့ဆော်မှုမတူဘဲ, မျှော်လင့်လှုံ့ဆော်မှုကျနော်တို့သေးမသိရပါဘူးကိုကမ်ဘာအကြောင်းကိုအမှုအရာကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သူတို့တစ်တွေကြီးမားသောဆုလာဘ်များကအနီးကပ်ဖြစ်အံ့သောငှါတစ်အချက်ပြအဖြစ်အစေခံသောကြောင့်, ကဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံကိုမှာထားအကျိုးရှိသည်။
ဘယ် inconstant မေတ္တာကိုအဆောင်တတ်၏။ ဒါဟာလူ့မေတ္တာနှင့်ပူးတွဲဖိုင်ကိုသင်တို့၏အကျိုးလမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်နိုင်သောပါမောက္ခ Bern ရဲ့စမ်းသပ်မှု, သဘာဝစစ်ကူအတွက်သစ်သီးဖျော်ရည်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြသည်ကိုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ အဆိုပါမနုဿဗေဒပညာရှင်ဟယ်လင် Fisher က 17 လူမျိုး၏အုပ်စုတစုကိုလေ့လာ ပြင်းထန်သောရင်ခုန်စရာချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ချုပ်ကိုင်အတွက်နဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ရာသခင်၏ပုံရိပ်တစ်ခုပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျိုးကို circuit ကို activated ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သငျသညျခန့်မှန်းရခက်မတ်ေတာရှိသောသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်လျှင်, သင်အလွန်ကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါ - ဒါပေမဲ့သင်တို့၏အကျိုး circuit ကိုပု capricious အပြုအမူကိုသတိထားမိခြင်းနှင့်သင်သတိရှိရှိသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ယုံကြည်ရာနှငျ့ဆန့်ကျင်စေခြင်းငှါ, သတင်းအချက်အလက်ပေးရမယ့်တာသေချာပါသည်။
အမှန်စင်စစ်သင်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုသတိထားမည်မဟုတ်ပါ။ ပါမောက္ခ Bern တွေ့ရှိခဲ့သောစပ်စုမှုအရာတစျခုသညျမိမိလကျအောကျခံအများစုအကျိုးကိုပေးသနားခဲ့သောအတွက်ကြိုတင်မှန်းဆသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ခွအေနအေအကြားခြားနားချက်ကိုပြောမပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူတွေကိုထက်ပို dopamine လွှတ်ပေးရန်စေနှင့်ပိုပြီး dopamine ပိုပြီးပျော်မွေ့ဆိုလိုတယ်ကတည်းက, ဒီလေ့လာမှု၏တဦးတည်းဆိုလိုကလူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူများနှင့်ထက်ခန့်မှန်းရခက်ဆုလာဘ်ပိုမိုအရသာကိုခံစားရကြောင်း - ဒါပေမယ့်သူတို့ကဒီအချက်ကိုသတိရှိရှိသတိထားမည်မဟုတ်ပါ။
မရင့်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်မိမိတို့အကျိုးကိုပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်းဘာသာရပ်များ '' ဖော်ပြထားဦးစားပေးနှင့်လေ့လာလှုပ်ရှားမှုအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရှိ၏။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိပဲ activated ခံရပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်တတ်တဲ့ထင်သောအရာကိုဆန့်ကျင်ဖြစ်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေထဲမှာမစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
ဤရွေ့ကား data တွေကိုထပ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, သူတို့ရဲ့စိတ်မချရချစ်သူများနှင့် ပတ်သက်. အမြဲတစေညည်းညူသူတွေကို၏ဝိရောဓိရှင်းပြပေမယ့်သူတို့ကိုပြန်လာမယ့်စောင့်ရှောက်, အချိန်နှင့်ပေလိမ့်မည်။
ဒါဟာအစ Cordelia ဘုရင်လီယာရဲ့နေမကောင်း-ကုသမှုတူသောအချို့သောနာမည်ကြီးမကောင်းတဲ့အပြုအမူ, ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။ ကံမကောင်းစွာ Cordelia အဘို့, သူမ၏ဖခင်သူသည်မိမိအကျိန် ဆို. ပူဇော်နှင့်အဆက်မပြတ်ချစ်ခင်သတို့သမီး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်ရေတွက်နိုင်သိတယ်။ အနည်းဆုံးအားလီယာရဲ့ဆုလာဘ် circuit ကိုမှ - သူမ၏ကွံညီအစ်မတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ် Cordelia မဖြောင့်သမျှကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါတွေကိုကျနော်တို့ရဲ့ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကျနော်တို့ကချိတ်ကိုချွတ်ဖြစ်ကြောင်း, မျှော်လင့်ဆုလာဘ်၏မျက်နှာကိုဖွင့််လင်းလို့ကြောင်းလို့ပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဝေးကနေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သို့မဟုတ်မလိုလားအပ်သော Impulses သတင်းပို့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပယ်ဖျက်ဖို့သတိအသိပညာကိုအသုံးပြုပါ။ အနည်းငယ်ကန့်သတ်ခွအေနမြေား မှလွဲ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏တာဝန်ခံဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်။
သို့တိုင်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုခန့်မှန်းရခက်ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်ဖို့ရေးဆွဲရှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုမိတ်ဆွေများကနားလည်ကူညီသင့်ပါတယ်။ သူတို့ကသေချာပေါက်နာကျင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ပျက်ဘို့စားကြူးသောသူတို့မဟုတ်; သူတို့ inconstant ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောအပျြောအပါးစွဲခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။
ရစ်ချတ်အေ Friedman လက်တွေ့ Psychiatry တစ်ဦးပါမောက္ခနှင့် Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်မှာ Psychopharmacology ဆေးခန်း၏ဒါရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။